आईडिया : शरिरको तौल घटाउने तरिका – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ भाद्र ७, शनिबार २२:१७
आज भोली मोटोपन नै धेरैको समस्या बनिरहेको छ । मोटोपनका कारण शरिर भद्धा देखिने कुरा त छदैछ , मोटोपनकै कारण मानिस बिभिन्न खतरनाक रोगहरुको शिकार बन्न बाध्य भै रहेको छ ।
एक पटक जब मानिसको मोटोपन बढ्छ त्यसपछि उ कसरि घटाउने भनेर सोच्न थाल्छ । जब हाम्रो शरिर मा तौल बढ्दै हामीसोच्न बाध्य हुन्छौं तौल कसरी घटाउने ? अहिले संभवत तपाई हामी धेरैले खोज्ने प्रश्न हो यो । यसका जवाफ पनि फटाफट मिल्छ तर, सबैको हकमा एउटै जवाफ प्रभावकारी हुँदैन । किनभने तौल नियन्त्रणको प्रसंगमा फेला पर्ने जवाफ भनेको, खानपानमा कटौती नै हो । अर्थात खानेकुरा नियन्त्रण गरेपछि मोटोपन घट्छ भन्ने आम बुझाई छ । तर बास्तबिकता के हो भनेर आज म तपाईलाई बताउँछु ।
के त्यसो हो भने आफ्नो नियमित खुराकमा कटौती गर्ने त ? कि खानाको मात्रा कम गर्ने ? हाम्रो दिमागले सबैभन्दा पहिला यहि सोच्छ तर यी मध्य कुनै पनि उपाए उपयुक्त छैनन् । वास्तवमा खाना छाडेपछि वा आफ्नो खुराक घटाएपछि शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्वको अभाव हुन्छ । यसले मोटोपन घट्ने होइन, कुपोषण हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले खानेकुरा घटाउने होइन, बरु व्यवस्थापन गर्ने हो । उचित खानेकुरा, सही ढंगले सेवन गरेर मोटोपन घटाउन सकिन्छ ।
तौल बढ्नु भनेको रोगलाई निमन्त्रणा गर्नु पनि हो । किनभने शरीरमा जम्ने अतिरिक्त बोसोले तौल बढाउँछ । यस्ता बोसोले शरीरका भित्री अंगको कार्य संचालमा अवरोध पुर्‍याउँछ ।त्यसैले त अहिले मान्छेहरु तौल नियन्त्रण गर्ने अनेक काइदा खोजिरहेका छन् । कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही खानेकुरामा कटौती गरिरहेका छन् ।आˆनो तौललाई लिएर मानिसहरु अक्सर तनावमा रहने गर्छन् । बढेको तौल कसरी कम गर्ने, कम भएको तौललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराले उनीहरुको मन सधै अशान्त रहने गर्छ ।किनकी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले जनाए अनुसार तौल बढेमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटोपना लगायतका समस्या निम्तिने गर्छ ।त्यसैले, तौललाई कम गर्न खाना खान छाड्ने भन्दापनि स्वस्थ आहार अपनाउनु पर्छ । प्रत्येक साता एक दुई पाउण्ड वजन कम गर्नु राम्रो मानिन्छ । अन्यथा, एकै पटक धेरै तौल कम गर्दा जसरी तौल घट्यो, त्यसैगरी बढ्ने गर्छ ।
जे खानुहुन्छ, त्यो सबै कापीमा लेख्ने
पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने मानिसको तौल कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसको लागि प्रत्येक दिन छ देखि आठ गिलास पानी पिउनु पर्छ । खाना खानुुभन्दा १ घण्टा अघि र खाना खाएको डेढ घण्टा पछि पानी पिएमा यसले पाचन प्रकृयामा सहयोग गर्नुका साथै शरीरलाई फाइदा गर्छ ।
आफूले के के खाने भन्ने कुराको पहिले नै योजना बनाउने । त्यसको सुची तयारी गर्ने । अनिमात्र खाद्यान्न किन्ने । अनावश्यक खरीदारी गर्नबाट बच्ने । अझ भोक लागेको समयमा त खानेकुरा किन्दै नकिन्ने । फलफूल, हरिया सागसब्जी, अंकुरित अनाज, सिङ्गो अनाज खरीद गर्ने । मासु किन्दा बोसो नभएको मासु किन्ने । दूग्धजन्य पदार्थ खरीद गर्दा फ्याटबारे विशेष ध्यान दिने ।तपाई आफ्नो दैनिक जिवनमा यी आईडियाको ईम्प्लीमेन्ट गर्नुहोस् र पनि तपाईको मोटोपन घटेन भने हामी तपाईको लागि उपयोगी टिप्स दिनेछौं ।
तपाईको प्रतिकृयाको लागी